16,335,006 unique visits
Read More · 0 Comments · 4191 Reads
· Banki Moon oo khadka teleefanka kula xiriiray Madaxweynaha Soomaaliya
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe Banki Moon, ayaa wuxuu khadka teleefanka uu kula xiriiray Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Somaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud, Arbacadii shalay.
Shiil on June 20 2013 14:26:48 ·
Read More · 0 Comments · 172 Reads
· Wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo Ururka Al Shabaab ku dhex maray Degmada Baraawe Waxaa sii xumaaneysa xaalada adag ee u dhaxeysa labada garab ee uu u kala jabay Ururka Al Shabaab, iyagoo isu khilaafay aragtidooda ku aadan dagaalada, ay kula jiraan Ciidamada Dowladda iyo Amisom.
New York on June 20 2013 13:25:36 ·
Read More · 0 Comments · 1658 Reads
· Raggii weeraray Dhismaha Xarunta UNDP oo maanta meydadkooda laga daad gureeyay �Daawo Sawirada�
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa wuxuu maanta ku guuleystay in meydadka raggii weeraray Xarunta UNDP laga soo dad gureeyo, si loogu aaso qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho.
New York on June 20 2013 13:05:17 ·
Read More · 0 Comments · 1780 Reads
· Banaanbax lagu taageeraayo Raa�isal Wasaaraha Turkiga oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho
Boqolaal ruux oo kamid ah shacabweynaha ku dhaqan Magaalada Muqdisho, ayaa waxay maanta isugu soo baxeyn banaan baxaan, oo lagu taageeraayay Raa�isal Wasaaraha Xukuumada Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
New York on June 20 2013 12:43:11 ·
Read More · 0 Comments · 586 Reads
· Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama oo ka hadlay qaraxyadii iyo dagaalkii UNDP Shabaab ay ka geysteen
Tan iyo shalay markii ay Muqdisho ka dhaceen weerarka iyo qaraxyada lagu qaaday xarunta Hay�adda UNDP ee Magaalada Muqdisho,waxaa soo badanaye masuuliyiinta canbaareynaysa weerarkaasi.
Rashka on June 20 2013 09:16:05 ·
Read More · 0 Comments · 1933 Reads
· Dowladda Uk oo sheegtay inay baareyso warar sheegaya in muwaadiniin udhashay dalkeeda ay ku geeriyoodeen weerarkii UNDP
Dowladda Uk ayaa shaacisay inay baareyso warar sheegaya in saddex ruux oo dalkeeda udhashay ay ku geeriyoodeen weerar shalay ka dhacay xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho.
Rashka on June 20 2013 09:02:15 ·
· Ra�iisul Wasaare Saacid oo loosoo jeediyay inuu xilka iska casilo
Ra�iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxaa loogu baaqay inuu xilka iska casilo,maadaama Xukuumadiisa ay ku fashilantay sugidda ammaanka Magaalada Muqdisho.
Rashka on June 20 2013 08:24:26 ·
Read More · 0 Comments · 3918 Reads
· Saraakiisha caafimaadka oo faah-faahin ka bixiyay xaalada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii iyo dagaalkii UNDP
Ku dhawaad 20-ruux oo shalay ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa xaaladooda caafimaad,waxaa lagu dabiibayaa Magaalada Muqdisho gaar ahaan Isbitaalka Madiina.
Rashka on June 20 2013 08:05:38 ·
· Yaasiin Raadeer oo ka hadlay xaaladiisa caafimaad,kadib dhaawacii rag ka tirsan Raaskaambooni ay ugeesteen
Guddoomiye ku xigeenkii maamulkii KMG Magaalada Kismaayo Yaasiin Raadeer oo dhawaan Kismaayo ay ku dhaawaceen ciidamo ka tirsan maamulka Raaskaambooni ayaa ka hadlay xaaladiisa caafimaad sida ay tahay.
Rashka on June 20 2013 07:47:49 ·
Read More · 0 Comments · 1148 Reads
Read More · 0 Comments · 2810 Reads
Read More · 0 Comments · 6295 Reads
Read More · 0 Comments · 682 Reads
Read More · 0 Comments · 1258 Reads
Read More · 0 Comments · 6025 Reads
Read More · 0 Comments · 552 Reads
Read More · 0 Comments · 4565 Reads
Read More · 0 Comments · 2698 Reads
Read More · 0 Comments · 1668 Reads
Read More · 0 Comments · 1582 Reads
Read More · 0 Comments · 3575 Reads
· Page 1 of 790: 1234...790